गर्मीमा बेलको जुस, दश हजार बोतलबाट चार लाख आम्दानी
By vijayafm on	 June 14, 2017 विविध खबर, स्थानीय, स्वास्थ्य/जीवनशैली/यौन
सुनवल, ३१ जेष्ठ । अहिले नवलपरासी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा गर्मी बढिरहेको छ । गर्मिमा सबैको रोजाइ चिसो पेय पदार्थ हुन्छ । बजारमा फलफुलबाट सर्बत बनाउने गरेको त पाइन्छ तर बेलवाट पनि सर्वत बनाएर राम्रो आम्दानी गर्ने सकिन्छ भन्ने पुष्टि गरेका छन् केही किसानले ।
सुनवल नगरपालिका वडा नं. ६ का धनप्रसाद तिवारीले खेर गइरहेका बेललाई प्रयोगमा समेत ल्याउनुभएको छैन, सबैको गर्मी फाल्नुभएको छ, थोरबहुत पैसा पनि कमाउनुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ “खेर गएको बेललाई सदुपयोग गरेको छु, १० देखि १५ जना कर्मचारी खटाएको छु उत्पादका लागि । सङ्कलन गरेर ल्याउनेलाई समेत रोजगार दिइरहेको छु । उचित ज्याला दिने गरेको छु, त्यसकारण पनि उहाँहरु पनि खुसी हुनुहुन्छ ।
बेलको जुस गर्मीमा निकै महत्त्वपूर्ण औषधिका रुपमा लिइन्छ । बेलको सर्वत खाँदा पनि स्वास्थ्यमा पनि निकै फाइदा पु¥याउँछ । औषधिका रुपमा र अन्य विकल्पका लागि पनि प्रयोग गर्नेहरुको संख्या धेरै रहेको तिवारीको भनाइ रहेको छ । यतिमात्रै होइन सुनवल नगरपालिकामा अतिथि सत्कारमा मात्रै होइन शुभकार्यमा समेत बेलको जुस लैजाने ट्रेन्ड बढेको तिवारीले बताउनुभयो । स्थानीय बजारमा राम्रो प्रभाव जमाएको उहाँको भनाइ छ । सुरुवाती समयमा बेलबाट पनि सर्बत बन्छ र ? भनेर धेरैले अविश्वासले हेरे । अविश्वासका कारण सुरुवाती समयमा अलि अलि गाह्रो भयो । अहिले यसको महत्त्व बुझेका कारण पनि धेरै उपभोक्ताको संख्या बढेको तिवारीले बताउनुभयो । आम्दानीका रुपमा १० हजार बोतल बिक्री गर्दा चार लाख रुपैँया आम्दानी हुने तिवारीले बताउनुभयो । काम पनि सजिलो र स्वदेशमै बसेर मनग्य आम्दानी गर्न सकिने यस व्यवसायलाई अझ विस्तार गर्ने तिवारीको सोच रहेको छ । व्यवसायबाट आफू निकै खुसी भएको तिवारीको भनाइ छ ।
बेलको पातदेखि फलसम्म उपयोगी मानिन्छ । बेलको पातले झाडापखाला, कब्जियत, पाइल्सका साथै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्यामा समेत फाइदा गर्छ । त्यस्तै, यसले क्यान्सर रोगबाट समेत जोगाउँछ । बेलको जुसको सेवनले शरीरमा भएको विषाक्ततालाई हटाउँछ । मिर्गाैलासम्बन्धी समस्या भएकाहरुले दैनिक बेलको जुस सेवन गर्दा फाइदा हुने भरतपुर अस्पतालका डाक्टर कमल सुवेदीले बताउनुभएको छ ।
बेलको जुस पिउँदा हुने ८ फाइदाहरु
– मुटुलाई स्वस्थ राख्दछ ।
– कब्जियतको समस्या समाधान गर्दछ ।
– कोलस्ट्रोलको मात्रालाई नियन्त्रित राख्न मद्दत गर्दछ ।
– पखाला नियन्त्रणमा लाभदायक हुन्छ । बेलको रसले पखालालाई रोक्ने काम गर्दछ । बेलको रसलाई सख्खर वा चिनीसँग मिलाएर पिउने गर्नाले पखाला रोकिन्छ ।
– शरीरलाई भित्रैदेखि चिसो राख्दछ । बेलको जुस पिउने गर्नाले शरीरमा गर्मीको प्रभाव हुँदैन । साथै यसले एसिडिटीलाई पनि भगाउँदछ ।
– सुत्केरी महिलाका लागि लाभदायक मानिन्छ । सुत्केरी अवस्थामा बेलको जुस पिउने गर्नाले दूध उत्पादनमा सहायकसिद्ध हुन्छ ।
– क्यान्सरबाट बचाउँछ । नियमित रुपमा बेलको जुस पिउने गर्नाले स्तन क्यान्सरजस्ता जोखिमबाट बचाउँछ ।
– रगतलाई सफा गर्दछ । बेलको जुसमा केही मनतातो पानी मिसाउने र त्यसमा थोरै मह राख्ने । यसरी तयार भएको जुस नियमित पिउनाले रगतलाई सफा गर्दछ ।